Sambatra ianareo miaramila fa tambatambazana hatrany
2009-12-11 @ 23:17 in Politika
Fanamarihana voalohany, dia arahabaina izany ny miaramila fa nisondrotra indray ny karaman'izy ireo tamin'ity volana desambra ity. Mbola anaty krizy ihany ny firenena fa tsy mahalala izany ianareo. Efa nampanantenaina anareo manko, hono, nyhampakarana avo dia avo ny karamanareo koa dia tontosa izy ankehitriny. Hita tokoa fa nandray anjara mavitrika tamin'ny tolona ianareo ka dia azonareo ny valin- kasasaranareo. Heveriko fa manantena ny mpitondra nanondrotra ny karamanareo fa fantatrareo avy hatrany ny andraikitra ankinina aminareo amin'izao toe-java-misy eto Madagasikara izao.
Matoa anefa nankinina aminareo izany andraikitra izany dia mety ho tsy moramora velively ilay izy fa mety iangonan'ny fialonan'ny hafa rehetra tsy nahazo fanondrotan-karamana ianareo. Manahy aza aho fa hitombo bebe kokoa ny fankahalana anareo saingy inona moa no iraharahianareo izany? Impiry impiry no mahazo tambin-karama midangana, izao indray fanondrotan- karama mihitsy! Ny tsy azoko tsara dia hoe 50% hoe ny fisondrotana? Toa tsy mampino kosa izany, afa-tsy hoe nidina dia nidina angaha ny sandam-bola malagasy... nefa azo tanterahina soa amantsara kosa raha ho anareo irery ihany ny fanondrotana ny karama ka.
Ankehitriny, tena antoka tsara tokoa ianareo tsy hahafaha-manozongozona ny fitondrana tokony arovanareo. Araraoty tsara fa tsy misy fitondrana toa ity amin'izao fotoana izao ity ka hitsinjo anareo. Izaho kosa, lasan'eritreritra fa mizotra amin'iny lalana iny izay nodiavin'i Alzeria tamin'ny fotoan'androny ny fiainana politika eto Madagasikara. Potehina tanteraka ny endri-panoherana rehetra, lazaina ho mpampihorohoro izy ireny, mpanakan-dalana. Tsy mandehandeha foana tsy akory ireny aferana basim-borona tratra teny Ivato sy ireo hafa saiky halefa aty kanjo hita IHANY tany Paris ireny. Niniana notratrarina ve ireny fitaovam-piadiana ireny sa tratra tsinahy? Nahavariana moa tao amin'ny Tvplus fa sary tahiry ka mampiseho basy Kalakhnikov no naverimberina fa tsy ireo basim-borona tratra tanaty baoritra (mba matanjaka mahazaka be mihitsy kosa ireo baoritra ireo an!). Toa karazana paika Saikolojia ireny, te-hanambarana fa nisy nikotrika fanonganam-panjakana indray teto e!
Fa angaha vitan'izany ihany. Miverina indray ny lazan'izao tsahotsaho rehetra izao fa METY hisy amin'izay ny mpikarama an'adin-d Ravalomanana (famerimberin'i Randy-do-it hoe Ravolomanana). Dia ambenana avokoa ny karazana sisintany rehetra na an-dranomasina na an'habakabaka. Efa nanendrikendrehana io filoha teo aloha io moa izany hoe fakana mpikarama an'ady vahiny izany. Oadray nisy tokoa ka! tsy tadidinao angaha ireny mpiambina azy taloha fony vao nirotsaka hofidiana ho filoham-pirenena voalohany ireny izy? Sa moa tsy mpikarama an'ady intsony ry Jean Marc Koumba ireny? Fa ilay izy fotsiny no adino no nilaza azy tamin'ireny fotoana ireny e!
Etsy ankilan'izany koa, ny fidradradradrana fa misy ny manakarama ny ambany tanàna indray handroba sy hamotika ary handoro tahaka ilay indray alatsinainy tamin'ny fiandohan'ny taona iny. Dia hampangaina ny sasany ho tena mpandroba fa mody milaza tena ho zanaka hendry mankahala fandrobana. Samborina avokoa izay miseho ho basivava rehetra. Dia tsy hisy intsony ny herim-panoherana, na dia hery tsy manana fitaovam-piadiana aza izany. Tsy ny famongorana ny mpanohitra velively anefa no lalana ahafaha-mampandroso an'i Madagasikara fa ahafahana mitoetra maharitra eo amin'ny fitondrana izany, eny fa na dia amin'ny alalan'ny fandrahonana sy ny fampihorohoroana aza no itondrana ny firenena, rehefa milamina tsy misy mikofoka dia izay no tadiaviny.
Fa iza aminareo no mbola hieritreritra fa hisy fifidianana izany eto Madagasikara ao anatin'ny dimy taona raha ny fitohizan'izao toe-javatra izao no jerena e? Tsy maintsy ao anaty firenena milamina anie no hanaovana ny fifidianana. Noho izany, izay kandidà tsy miteraka korontana ny firenena, indrindra indrindra tsy manohintohina ny tombotosan'ny miaramila, ihany no afa-mirotsaka. Fa na izany aza mbola misy olona mety ho andrasana ho ampy 40 taona eto vao mety hisy izany fifidianana ho filoham-pirenena izany (izay ilay hoe afaka dimy taona).
Fa antony iray mampitarazoka ity toe-draharaha ity ihany koa ny fihazohazoan'ny vondrona iraisam-pirenena tsy mety hanasazy ny tsirairay amin'ireo mpanongam-panjakana fa mbola variana mandrahona fotsiny. Ny an'ny olona jereo fa tonga dia tsy navelany hiditra teo Madagasikara fotsiny izay manelingelina azy dia vita kabary, sahirana avokoa ny nitady vahaolana tsy hanjerana ny sazy amin'i Madagasikara hanapahana ny AGOA miaraka amin'ny Amerikana. Faly ery ny mpanohana azy mitehaka amin'izao fahasahiana ananan'ny mpitarika azy izao. Araka ny nambarako moa dia ilaina fantarina tsara ny tanjona kendreny ahafahana manohitra tsara ny fikasany. Ny tiako marihina aloha izao dia ny tsy tokony ivoahany mankalaza ny fetin'ny faran'ny taona any amin'ny Reny Malala nefa andro mandalo fotsiny izany fa tsy manakana ny hanohizany iny lalana iny, izay feno hazofijaliana.
Farany: Lasa maharikoriko aoka izany ho'aho ny miresaka politika eto Madagasikara ary tsy maha-te-hanoratra intsony, satria raha mbola tsy mihetsika avokoa ny antokon'olona iharan'ny tsy rariny sy ny tsindry hazolena rehetra tsy misy na inona na inona azo atao hanoherana basy mihitsy eto. Efa tsy mila fifampiresahina intsony ireo olona ireo, nefa na dia maharikoriko tahaka izany aza ilay miresaka politika dia mbola lerako ihany. Fa na eo aza izany, Happy Birthday to You Mr President Ravalomanana!
jentilisa, 12 desambra 2009 amin'ny 01:22